महामारी तथा रोग नियन्त्रण केन्द्र(इसीडीसी)का प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार निको हुने दर बढिरहँदा विश्वको तथ्याङ्क भेट्न एक साता लाग्छ । तर क्वारेन्टाइनमा रहेकाले उक्त दरलाई प्रभावित बनाउन सक्छन् । क्वारेन्टाइनमा हाल २३ हजार ७८४ जना छन् । जसको परीक्षण गरिएको छैन । क्वारेन्टाइनको रहेकाहरूको परीक्षण नतिजाले नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या अझै बढन सक्ने डा. पाण्डे बताउँछन् ।।
गत जेठ महिनासम्म न्यून सङ्क्रमित फेला पर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक रुपमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो छ । जसमध्ये अधिकांश विदेश तथा बाहिरी जिल्लाबाट आएका छन् । तर सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएर सङ्क्रमण हुनेहरू पनि बढी छन् । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा उपत्यकामा फेला पर्ने सङ्क्रमित अस्पतालमा भर्ना भएका, विमानस्थल भएर आएका र केही कुनै यात्रा वृत्तान्त नरहेका पनि छन् ।
तर उपत्यकामा सङक्रमण दर बाहिरको तुलनामा थोरै पाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सङक्रमण दर शून्य दशमलब पाँच प्रतिशत छ । बाहिर छ प्रतिशत रहेको छ । उपत्यकाबाहिर महिला सङ्क्रमित करिब दश प्रतिशतको हाराहारीमा रही घटबढ हुँदै आएको छ । तर काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितमध्ये ४० प्रतिशत महिला छन् । डा. पाण्डेले यसबारे थप अध्ययन भइरहेको बताउँछन् ।।
हाल उपत्यकामा विभिन्न सङ्क्रमण फैलनसक्ने सम्भावित १० स्थानबाट तीन हजार जनाका स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा एक हजार ६२१ जनाको परीक्षणको नतिजा आएको छ । जसमध्ये तीन जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ । जुन ०.१८ प्रतिशत हो । जोखिममा रहेका समुदायबाट उक्त नमूना सङ्कलन गरिएको छ । बैङ्क, वित्तीय संस्थान, बजार–पसल, स्वास्थ्यकर्मी र घना बस्तीबाट नमूना सङ्कलन गरिएको छ । इश्वरचन्द्र झाले गोरखापत्र दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।